Buug Shaaca ka Qaaday Naceybka Uu Trump U Hayo Somalida Oo la soo Bandhigay. – Awdalmedia
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ah nin xagjir ah oo si weyn u neceb dadka soo galootiga ah ee kunool dalka Mareykanka, waxa uuna horey dalka Mareykanka uga mamnuucay in ay yimaadaan dadka kasoo jeeda dalal Soomaaliya ku jiro.
Waxaa hada soo shaac baxay in Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu naceyb gaar ah u qabo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan qaxootiga, waxaana xogtan lagu daabacay buug ay qoreen wariyaal caan ah.
Bogga uu Internerka ku leeyahay Tv-ga CNN ayaa lagu daabacay qeyb kamid ah buug ay qoreen labo Wariye oo ka tirsan wargeyska The New York Time , waxaana buuga lagu cadeeyay in Trump naceyb gaar ah u qabo Qaxootiga Soomaaliyeed.
Sida ku qoran buuga oo ciwaan looga dhigay colaada xuduuda Madaxweyne Trump ayaa bilihii ugu horreeyay ee xukunka waxa uu Elaine Duke oo xilligaasi ahayd kusimaha arrimaha ammaanka gudaha weydiiyay sababta ay u mamnuuci la’dahay qaxootiga ka imaanaya Soomaaliya.
Buugan ay qoreen Wariyaasha katirsan New York Times waxaa lagu muujiyay aragtida madaxweyne Trump ee ku aadan dadka ka soo jeeda Soomaaliya, kuwaasi oo uu arko in ay halis ku yihiin Mareykanka.
Madaxweyne Trump iyo Stephen Miller ayaa la sheegay in si gaar ah ay u neceb yihiin Soomaalida, waxa ayna Soomaalida tusaale u soo qaadan jireen mar kastaa oo ay doonayaan in ay muujuyaan halista dadka qaxootiga ah ay u keeni karaan Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka Trump oo ah nin mayal adag ayaa marar badan tusaalooyin aan fiicneyn usoo qaatay Soomaaliya, waxaana buugan uu banaanka soo dhigay in Trump naceyb gaar ah u qabo qaxootiga kasoo jeeda Soomaaliya ee Mareykanka kunool.